Intengiso yeIndipolis kunye neKlabhu yeNcwadi yeShishini | Martech Zone
Intengiso yeIndipolis kunye neKlabhu yeNcwadi yeShishini
NgoMvulo, Agasti 14, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Namhlanje kwisidlo sasemini ndidibene noogxa abambalwa ukuba sixoxe Incoko ezihamba ze. Besinamaqela amnandi abantu abamele amashishini amaninzi: ezomthetho, ubudlelwane boluntu, umabonwakude, umnxeba, i-intanethi, ukuthengisa nge-imeyile, ezemidlalo, ukonwaba, itekhnoloji yolwazi, ukuthengisa kunye nokupapasha!
Akukubi kumboniso wokuqala!
Uninzi lwethu lwalufunde ngokupheleleyo Incoko ezihamba ze, ezinye beziyinxalenye yokuhamba kwayo, kwaye ezimbalwa bezizalisekisile ezinye zezixhobo ezisencwadini. Oogxa bam banokuziva bekhululekile ukungena ngaphakathi ukuba bangathanda, kodwa nalu uluvo lwam ngesidlo sasemini, ingxelo ngencwadi, kunye nokubhloga ngokubanzi:
Ukubhloga kungangabikho kuzo zonke iinkampani. Ukuba awuzukuveza elubala, unokwenza ububi kwinkampani yakho kunokuba ulunge.
Abathengi bakho baya kuncokola nawe okanye ngaphandle kwakho. Kutheni ungazami ukulawula isikhokelo sale ncoko ngokuba ngowokuqala ukubhloga ngayo? Iforum yomyalezo ilindele ukuba abathengi bakho babuze. Ibhlog lithuba lakho lokuphawula ngaphambi kokuba licelwe.
Imigaqo-nkqubo yokuBloga ayinamsebenzi. Xa abasebenzi bebhlog, ukongeza iposti engafanelekanga akukho monakalo ungaphantsi kokutsho nge-imeyile, okanye kwifowuni, okanye kwincoko. Abasebenzi banoxanduva lokuphendula kwinto abayithethayo nangayiphi na indlela. Ukuba uyibhlogger… xa uthandabuza, buza! (Umzekelo: Khange ndicele mvume kwiqela ukuba ndingadwelisa amagama abo, iinkampani, izimvo, njlnjl andizukuya apha)
Izixhobo zazinenkxalabo kunye nesihloko sencoko. Liphi ixesha? Lithini icebo? Uthini umyalezo?
Kulula ukubhloga, kodwa kufuneka ufunde ukusebenzisa ubuchwephesha emva kwebhlog yakho ... i-RSS, amakhonkco, ukulandelela umkhondo, iiping, izimvo, njl.
Ukuba ukubhloga kufakwe njengesicwangciso, yintoni imbuyekezo kutyalo-mali? Le yayiyingxoxo efanelekileyo. Ndicinga ukuba imvumelwano jikelele kukuba ayisekho ukhetho apho imbuyekezo kutyalo mali kufuneka ivavanywe… yimfuno kunye nolindelo oluvela kubathengi bakho ukuvula le migca yonxibelelwano. Ngaphandle koko, baya kuhamba kwenye indawo!
Ukuba ulishishini, ukuthengisa okanye itekhnoloji yobuchwephesha kwingingqi ye-Indianapolis kwaye ungathanda ukusijoyina kwiKlabhu yeNcwadi yethu, bhalisa ngokulula Ndikhetha i-Indy! kwaye ungenise ibali lakho lokuba kutheni ukhethe i-Indianapolis. Siza kukubeka kwi-imeyile yethu yokuhambisa enegama lencwadi elandelayo esiza kuyifunda kunye nokuba siza kuyilandelela nini.
Kwinqaku elisecaleni, uShel Israel wayenohambo olwalurhoxisiwe kwaye luvulekile ukwenza uthethwano. Njengoko ebeka, Ndiza kudibana neMali yokuBambisa. Umbulelo okhethekileyo kuMnu Israel ngencwadi yakhe nangokukhuthaza abantu abambalwa apha eIndianapolis ukumba kweli thuba lethu kunye nabaxhasi bethu. Sinetyala elingaphezulu kakhulu kweendleko zeencwadi!
Enkosi kakhulu kuPat Coyle ngesisa sakhe ekuququzeleleni indibano yethu yokuqala kunye neMyra ngokusingatha iklabhu yethu kunye nokubonelela isidlo sasemini esimnandi!
PS: Kananjalo enkosi kwintombi yam, sifike emva kwexesha kubhaliso lweklasi. Kwaye ndiyabulela kumqeshi wam, ondinciphise emva kwemini!
tags: UShell uSirayeli
Iingcebiso zam ezili-10 zokuPhucula iBhlog yakho
Kwimpembelelo nakuZenzekelayo… uHlelo oluSasazwayo lweWordPress
Aug 14, 2006 ngo-10:02 PM
Aug 14, 2006 ngo-11:53 PM